Laga soo bilaabo magaalooyinka 3D iyo isbeddellada GIS 2011 - Geofumadas
Laga soo bilaabo magaalooyinka 3D iyo Isbeddellada GIS 2011
Abriil, 2011 Geospatial - GIS, Microstation-Bentley
Wargeyska saddexaad ee majaladda Geoinformatics ayaa yimid, mowduucyo xiiso leh. Eric Van Rees ayaa nagu yaabay in uu soo galo tifaftirka gaaban, kadib markii uu soo bandhigay muuqaalkiisa caalamiga ah Barcelona, ​​halkaas oo uu sheegay in uu ku dhiirigeliyay inuu qoro maqaal gaar ah -in aan si dhaqso ah u aragno- on qabto in uu leeyahay software ah il furan suuqa geospatial. Markaas on pages 22-23 sharaxay si faahfaahsan, inkastoo waqti hore waxaan arki xiisaha teknoolajiyada furan iyo wacyi gelinta dadaallada Hispanic ayaa dareenkaa on heerka waxay muhiim u yihiin kor loogu qaado wacyiga ee waxa aan ognahay, laakiin waa in aan la joogteeyo weerar ku soo qaatay mashaariicda sida FOSS4G. Waxaa aad muhiim u ah in aan maqlo dadkii horeba uga xayiran in ay, laakiin go'aan ka heer ka mid ah shirkadaha gaarka loo leeyahay, dawladaha iyo shirkadaha suuq qalab iyo software lahaansho magac waa.
Isbedelka magaalooyinka 3D
Waxaa jira maqaalo dhan oo ku saabsan isbeddellada in Bentley rajeyneyso in ay ka dhigto BentleyMap iyo ka faa'iideysiga ah I-moodooyinka. Saddex pages buuxa oo gooni loo sooco waxa ay noqon kartaa aragti ah in shirkadaha waa weyn ee software geospatial ee Misbaax ku ah in ka dhigan tahay keenidda magaalooyinka waaweyn in lagu daydo saddex dhinac-cabbir ah halkaas oo in ka badan baaralelogaraam texturing oo doonaysa in ay link u doorsoomayaasha kala duwan ee qorshaynta horumarinta iyo isticmaalka dhulka xiriirrada bulsho kaabayaasha .
Waxaan xusuustaa mawduuc ka socota Baltimore, iyada oo xoogga la saarayo kaabayaasha, xidhiidhkaas oo abuuray nin si loola macaamilo dabeecadda. Laakiin ruuxu maaha inuu falanqeeyo shayada shakhsiyaadka -waxa horay loo qabtay- laakiin guud ahaan oo isku dayaya in lagu beddelo algorithms cilaaqaadka adag ee ku jira dhammaan shabakadeeda iyo isbeddellada cabbirka afaraad: waqtiga iyo xiriirka qiimaha.
Waa mawduuc cilmi ah oo ku saabsan wadamada Hispanic, halkaas oo mudnaanta ay kala duwan yihiin, ku dhawaad ​​dhammaan sababaha caadooyinka siyaasiyiinta -sababtoo ah qof waa in lagu eedeeyaa- Laakiin marka la eego waxa Helsinki ka dhisi doono Finland, Montreal Canada iyo Rotterdam ee Nederland waxay faa'iido u lahaan doontaa in ay tijaabiyaan oo ay nidaamiyaan waxa aan ku riixi doono dhawr sano ka dib lacagtii aad u yarayd, macnaha kale. Hawlgalku wuxuu ku jiraa isbeddellada, qaababka nidaamsan ama ugu yaraan ku salaysan heerarka OGC ee ixtiraamaya barnaamijyada Furan ee furan iyo kuwa qarsoodi ah ee aan dembi lahayn marka ay tixraacayaan fikradda BIM.
Laakiin waa inaanan u dallacin arrimaha arimaha aan khuseynin mawduuceena. Magaaladu waa inay tixgeliyaan qorshaynta dhuleed iyadoo leh mudnaanta weyn, isticmaalka dhulku wuxuu muhiim u yahay maaha inuu muujiyo khariidad rinji ah. Dhibaatada ka dhalatay qaraxyada ku saabsan bay'ada deegaanka iyo qiiqa gaaska, xiriirka isbeddelka cimilada, musiibooyinka dabiiciga ah iyo khayraadka dabiiciga ah ee joogtada ah waa in la tixgeliyaa.
Geomarketing iyo Google ee GIS
Tani waa qodob kale oo xiiso leh oo ku salaysan isbedel aan dib-u-noqosho ah oo qaadaya waxa markii hore loo yaqaan Clearinghouse, oo hadda ka weyn oo qaangaar ah oo leh qaabka ballaaran ee SDI. Voyager waa xal u baahan in lagu xalliyo maareynta xogta xeeladeysan iyada oo fududeeynaysa helitaanka raadinta fudud iyo isdhexgalka hawlaha heerarka kala duwan ee isticmaaleyaasha CAD / GIS.
Waxaan kugula talinaynaa inaad fiirsato, sababtoo ah Google ayaa hubaal ahaan u soconaya halkaa. Wixii Khariidadaha Google iyo Google Earth waa jiraan, laakiin waxay yihiin kuwa kaliya ee daawadayaasha macluumaadka; dhammaan boggaga internetka, blogyada iyo dukumiintiyadu wali waxay raadinayaan foom aan la taaban karin oo ka muuqda foomka Google, iyada oo la xiriirta shabakadaha bulshada ku daray bangiyada xogta ee dadku yihiin. Laakiin fikradda ah in la raadiyo waxyaabo la xidhiidha shaaha juqraafiyeed gaar ah ayaa weli ah baahi weyn Voyager Waa mid ka mid ah kuwa doonaya in ay wax ka baxaan tan.
Xayawaanku ma ku dhiman doonaan 2012?
Waqtigaan ka hor waxaan kugula taliyay inaad daawato filimka Ogaanshaha, Wax sheekooyin sayniska aan macquul ahayn, laakiin ku salaysan cilmiga sayniska waxay saadaalinayaan in 2012 noqon doonaa sanadka halkaas oo wareegga sunspot ka gaadhay heerkii ugu xilligii marka aan hareereeyay satalayt meel. Filimku wuxuu 2012 ku darayaa leh hab ka yar hal abuur leh oo ku saabsan fasiraada kale gacanta u xisaabin Mayan xitaa ma saadaalin laga yaabaa halaagoodii hadda xoog u bilaabaan iyo dar dhadhanka xun ee shineemo gringo in ay sii qof oo stress ah by dhimashada.
Waa hagaag, sida la og yahay, satellites badan oo qashinka ah ayaa hadda waxyeello u geystay qaraxyadii qorraxda. Dhimashadu waxay qaadatay timo dhowr ah, kuwaas oo xusaya in 2012 ay burburin karto dhamaan qalabka rakaabka ah ee hadda noo ogolaanaya inaan isticmaalno GPS. Y2K kale oo yar yar ayaa nagu adkeyn doona, laakiin ka feker hawada marin haweedka, codsiga gaadiidka dhulka, badda, hubka ... gaaban. Haddii mawduucu sii wado, oo waxay yiraahdaan in uumiyayaashu sameeyaan shaqada internetka, haddii aan burineyno qof kasta ... malaha todobaadkii oo aan helin waxkasta oo aan ku leeyahay emailka,! si ka fiican ma u maleynayo sidaas.
Waxay u egtahay mid aad u badan sida shirqoolnimada ee barnaamijka HAARP. Laakiin waxaan kugula talinaynaa inaad eegto maqaalkii ka hadlayay horumarka Nidaamka Gaadiidka Caalamiga ah (GNSS).
Waxaan kugula talineynaa inaad tagto goobta iyo akhrinta daabacaadda; waxaa haboon inaad u soo qaadatid sida PDF oo loogu talagalay ururintaada, in xNUMX ee 17 laga yaabo inaysan noqon karin Internet, XD. Dheeraad dheeraad ah ayaa jira sigaarcab kale oo ku lug leh ESRI, Intergraph, Leica iyo Bentley.
Bentley Systems GPS majallado
Post Previous«Previous Maanta waxaan rabaa inaan sameeyo wax ka duwan
Post Next Blogsy, oo loogu talagalay blogyada laga helo IPadNext »